XOG:- Tirada Ciidamada gaarka ah ee Haramcad ee DFS ay ka soo qaadday Galmudug oo la ogaaday - Ceeldheer News: Somalia News Update
Dowladda fedraalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay ciidamo fara badan ka soo daad gureysay deegaanno ka tirsan mamulka Galmudug,waxaana markii ugu horeysay la helay xogta ciidamadaas.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa shaaca ka qaaday in dowladda fedraalka Soomaaliya ay Laba Diyaaradood oo gaar ah u dirtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug si ay u soo daabulaan ciidamo halkaasi ka joogay dowladda.
Xogta ay heshay shabakadda wararka ee Ceeldheer.net ayaa sheegeysa in Gelinkii hore ee Shalay iyo Gelinkii dambe ee isla Shalay Laba diyaaradood oo ka degay Dhusamareeb ay soo qaadeen cutubyo ka tirsan ciidamada policeka sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad.
Tirada ciidamada la soo qaaday ayaa u dhaxeeya 100-ilaa iyo 120-Askari oo Hubeysan kana mid ah ciidamada Boliiska gaarka ah ee Haramcad,islamarkaana Dhusuamareen la geyay xilligii doorashada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor.
Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa xaqiijiyay ciidamada laga soo daad gureeyay magaalada Dhuusamareb,islamarkaana sheegay in baahi weyn ay u qabtay Galmudug.
Mareykanka oo Cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogay Soomaaliya
Heshiis la kala dhax-dhigay Beelo ku dagaalamay gobolka Gal-gaduud
Dowladd Sacuudiga oo sheegtay in la xiri doono Dugsiyada Turkiga ku leeyahay dalkooda